I-Kurt Zouma Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts
ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseFrance I-Kurt Zouma Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB iveza iNqaku elipheleleyo lebhola lebhola laseFransi eligama lesidlaliso “I-LaZoumance". Ibali lethu leKurt Zouma yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukususela ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku. Uhlalutyo lubandakanya ubomi bakhe bokuqala, imvelaphi yosapho, ubomi bomntu, iinyani zentsapho, indlela yakhe yokuphila kunye nezinye izinto ezincinci ezaziwayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi ngamandla akhe, amandla okufunda umdlalo kunye nobukho be-aerial. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abajonga i-Biography kaKurt Zouma enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
I-Kurt Zouma yabantwana Ibali leNqaku leNgcaciso ye-Untold Biography - Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
Ukuqala, Kurt Happy Zouma wazalwa ngomhla we-27th ka-Okthobha i-1994 eLyon eFrance. Wayengomnye wabantwana be-6 owazalelwa kunina owaziwayo kunye notata wakhe, uGuy Zouma.
Utata kaKurt Zouma -uGuy. Ityala lemifanekiso: I5foot5.
Isizwe samaFrentshi sobuzwe obuNtsundu kunye neengcambu zaseAfrika sakhuliselwa kwindawo yakhe yokuzalelwa eLyon, eFrance apho wakhulela kunye nomzalwana osele ekhulile ochongwe njengoLionel kunye no4 abanye abantwana basekhaya.
UKurt Zouma wakhulela eLyon eFrance. IiCredits zemifanekiso: FPCP kunye WorldAtlas.
Ukukhula eLyon, uZouma omncinci wayengenamdla ekudlaleni ibhola. Ngapha koko, wayekhetha ukudlala i-basketball. Ngelixa uZouma wayeneminyaka eyi-9, wazama ukudlala ibhola kwi-Vaulx-en-Velin yendawo kwaye wabona ukuba wayelunge kakhulu kuyo.
I-Kurt Zouma yabantwana Ibali leNqaku leNgcaciso ye-Untold Biography - Imfundo kunye neBraduer Buildup
Kungekudala emva kokuba uZouma eqalise ukudlala iVaulx-en-Velin, wenza isithembiso kubazali bakhe sokuba uza kuyenza kulo mdlalo. Ke, usebenze nzima ukuqhuba kakuhle kwezemidlalo ethathela ingqalelo eyona njongo iphambili yokwenza abazali bakhe babe neqhayiya.
Kurt Zouma - 3rd ukusuka ngasekhohlo kumqolo we-2nd- kwiklabhu yabantwana iVaulx-en-Velin. Ityala lemifanekiso: FPCP.
Ngelixa eVaulx-en-Velin, uZouma wayenemfundo ebanzi kwaye eyakha amakhondo kwibhola ekhatywayo eyambona wazama izikhundla ezahlukeneyo phambi kokuzinza njengomkhuseli. Ngamaxesha amathandathu oqeqesho, uZouma wajoyina iAkhademi yaseSaint-Étienne njengomntu oneminyaka eyi-15 kwi2009.
I-Kurt Zouma yabantwana Ibali leNqaku leNgcaciso ye-Untold Biography - Ubomi bokuqala
Kwakuse-Vaulx-en-Velin apho uZouma wabukhulisa ubuchule bakhe bokuzikhusela kunye nokunyuka kwe-meteoric kwiinkqubo zolutsha. Indlela yakhe eyahlukileyo yokudlala ngokukhawuleza yabamba ingqalelo yamagosa eeklabhu afuna ukumphakamisa ngaphambi kwesizini ye2011-12.
I-Kurt Zouma - 3rd ukusuka ngasekhohlo kwindawo yokuma-ekunyukeni eVaulx-en-Velin. Ityala lemifanekiso: FPCP.
Ke, uZouma wasayina isivumelwano sakhe sokuqala sobungcali kunye ne-Saint-Étienne kwi-2nd ka-Epreli 2011 kwaye wenza udlala indima yakhe kwiqela lokuqala ngexesha lomdlalo we-Coupe de la Ligue ngokuchasene neBordeaux kwi-31st ka-Agasti 2011. Uye waqhubeka nokunceda ukuphumelela i-Saint-Étienne ukuphumelela isihloko se-Coupe de la Ligue kwi-2013 kwaye wayejonge phambili kwithemba lokufumana umsebenzi kwiiklabhu eziphezulu.
I-Kurt Zouma yabantwana Ibali leNqaku leNgcaciso ye-Untold Biography - Iindaba zokuBamba igama
UZouma unqwenela ukuhla enyuka ekugqibeleni waba ngumzimba kwi-2014 xa wasayinayo kwicala lesiNgesi iChelsea FC kwisivumelwano seminyaka emihlanu enesiqingatha esimalunga nesigidi seerandi (i-12 yezigidi).
Nangona kunjalo, intshukumo yomdlali ovuyisileyo ukuya kwiklabhu kunye nomnqweno wokufuna ukwenza amabala ayikhawulezi njengoko wayelindele into yokuba i-Chelsea imbolekise ibuyele e-Saint-Étienne isizini yonke.
I-Chelsea iboleke uKurt Zouma's eSaint-Étienne emva kokumsayina kwi-2014. Ityala lemifanekiso: Ezemidlalo.
I-Kurt Zouma yabantwana Ibali leNqaku leNgcaciso ye-Untold Biography - Ukuphakama Kwigama leNdaba
Iziko-ngasemva ekugqibeleni lenze ukuba lifumane ubumnandi beChelsea kumdlalo wangaphambi kwesizini ngokuchasene neWycombe Wanders. Ubethwe yinombolo yeJersey 5, warhola impumelelo ebonakalayo kwiphulo lakhe lokuqala elipheleleyo ngokunceda i-Chelsea iphumelele indebe ye-League kunye ne-Premier League kwi-2015.
UKurt Zouma uphumelele isihloko sePremier League kunye neChelsea kwi2015. Ityala lemifanekiso: DlulisaMarket.
Ukuqhubela phambili ukuza kuthi ga ngoku, uKurt Zouma ulilungu leqela lokuqala leqela leqela leqela laseChelsea FC kwaye uye wachazwa njengo "mdlali wokugqibela" kwisantya sakhe, ukutsiba, ukudlula, ukudubula kunye nobuchule bokwenza. Ezinye, njengoko besitsho, yimbali.
I-Kurt Zouma yabantwana Ibali leNqaku leNgcaciso ye-Untold Biography - Ubuhlobo boBomi boBomi
UKurt Zouma utshatile ngexesha lokubhalwa. Sikuzisa iinyani malunga nembali yakhe yokuthandana kunye nobomi bomtshato. Ukuqala, uZouma akaziwa ukuba wayenayo nayiphi na intombi ngaphambi kokuba adibane nomfazi wakhe uSandra.
Isiqingatha esingcono sisizwe saseFrance kunye neminyaka emibini emdala kunoZouma. UZouma wayeneminyaka eyi-19 xa wayetshata naye kwi-2012. Umtshato wabo uya usomelela kwaye usikelelwe ngabantwana ababini - unyana nendodakazi - ngexesha lokubhalwa.
UKurt Zouma onomfazi nabantwana. Ityala lemifanekiso: TheSportReview.
I-Kurt Zouma yabantwana Ibali leNqaku leNgcaciso ye-Untold Biography - Ubomi beNtsapho
UKurt Zouma uvela kwimvelaphi yosapho olukumgangatho ophantsi. Sikuzisa iinyani malunga nobomi bosapho bakhe.
Malunga notata kaKurt Zouma: Uyise kaZouma uchongwa ngegama-uGuy. Ungumntu wesizwe weCentral African Republic ufudukele eFransi ekhangela amadlelo aluhlaza iminyaka emininzi ngaphambi kokuba uZouma azalwe. Xa wawuseFrance, uGuy wasebenza nzima ukondla usapho kwaye wayedla ngokuqhuba uZouma kuqeqesho. U-Kurt ubonga utata oxhasayo ngokwazi ukuba ungqongqo kwaye unomdla kangakanani kubantwana bakhe.
Utata kaKurt Zouma, uGuy. Ityala lemifanekiso: 5foot5.
Malunga nonina kaKurt Zouma: UZouma unomama omncinci owaziwayo owayesebenza ecoca. Usebenzisa umdla omkhulu kwimidlalo kaZouma kwaye ebekhona xa iziko-lasemva lisayine ikhontrakthi yakhe yokuqala no-St Etienne njengomntu oneminyaka eyi-16. Akumangalisi ukuba angakwazi ukuzibamba iinyembezi zovuyo xa kwakhutshwa ukuba uZouma wayesayine i-Chelsea kwi-2014. Umama oxhasayo uhlala ecebisa uZouma ukuba ajonge kwimidlalo yakhe kwaye abe ngoyena fan wakhe mkhulu.
Malunga nomntakwabo kaK Kurt Zouma: U-Kurt unabantakwabo be-5 ababandakanya udade osaziwa kancinci malunga naye. Nangona uZouma abelana ngokusondeleyo kunye nabo, usondele kakhulu kumntakwabo omkhulu uLionel owamkhuthaza ukuba adlale ibhola. ILionel idlalela iBourg-en-Bresse tiger yesithathu ngexesha lokubhala. Kwinqanaba lakhe, uZouma usebenza njengempembelelo ekhuthazayo kumntakwabo omncinci uYoan odlalela iBolton Wanderers.
Kurt Zouma kunye nabazalwana. Ityala lemifanekiso: Instagram.
Malunga nezihlobo zikaKurt Zouma: Kude nosapho lakwa Zouma, akukho nto incinci iyaziwayo ngootatomkhulu nootamkhulu kunye noomakhulu nootatomkhulu bakhe. Ngokufanayo, akukho kuninzi okwaziwayo malunga nobuninalume bomalume bakaZouma, oomalume, umtshana kunye nomtshana wakhe ngelixa abazala bakhe bengakhange babonwe kwimicimbi ebalulekileyo yobomi bakhe bokuqala kude kube ngoku.
I-Kurt Zouma yabantwana Ibali leNqaku leNgcaciso ye-Untold Biography - Iinkcukacha zobomi bomntu
Yintoni ebangela ukuba uKurt Zouma abeke uphawu lokukhumbula? Hlala emva njengoko sikulethela ubuntu bakhe ukuze sikuncede ufumane umfanekiso opheleleyo ngaye. Ukuqala, i-persona ye-Zouma ngumdibaniso weempawu ze-Scorpio zodiac.
Unothando, ukusebenza nzima, intuitive kwaye ngokuthobekileyo utyhila izibakala ezinxulumene nobomi bakhe bobuqu kunye nabucala. Unomdla okonwabayo kunye nezinto azonwabisa ngazo ezibandakanya ukudlala imidlalo yevidiyo, ukubukela ii-animes, ukugcina imidlalo ye-basketball, ukuhamba nokuchitha ixesha elihle nabahlobo kunye nosapho.
U-Kurt Zouma ubukela i-anime njengomsebenzi we-pastime. Ityala lemifanekiso: Instagram.
I-Kurt Zouma yabantwana Ibali leNqaku leNgcaciso ye-Untold Biography - Lifestyle Facts
I-Kurt Zouma inexabiso eliqikelelweyo nge-5 yezigidi ngexesha lokubhala. Imvelaphi yobutyebi bakhe isusela kumvuzo awufumanayo kwimidlalo yebhola kunye neendlela zakhe zokuphelisa.
Ngenxa yoko iziko lasemva linikezelwa ekuchitheni imali enkulu kwaye linempahla elithetha kakuhle njengobomi bakhe eLyon eFrance kunye nohambo lweenqwelo - mafutha ezibandakanya iParcel Panamera phakathi kwezinye iimoto.
UK Kurt Zouma uboniswe kwenye yeembaleki zakhe ezixhaphakileyo. Ityala lemifanekiso: I-WTFoot.
I-Kurt Zouma yabantwana Ibali leNqaku leNgcaciso ye-Untold Biography - Inyaniso engekho
Ukuhlanganisa ibali lethu lobuntwaneni likaKurt Zouma kunye ne-biography, nantsi iinyani ezingafakwanga kwi-bio yakhe.
UZouma wanikwa igama lokuqala u "Kurt" emva ko Kurt Sloane, umlinganiswa kaJean-Claude Van Damme kwifilimu ye-1989 'Kickboxer', ngenxa yokuba abazali bakhe bachukumiseka emva kokubukela umdlalo owonwabisayo owenziwa kumdlalo bhanyabhanya. Igama lakhe eliphakathi 'lonwabile' lihambelana nesiko laseAfrika lokusebenzisa amagama afanelekileyo kumagama aphakathi.
U-Kurt Zouma wabizwa emva kwe-Kurt Sloane, umlinganiswa kaJean-Claude Van Damme kwi-'Kickboxer '(1989) Ityala lemifanekiso: Mirror.
Akanazo ii-tepi ngexesha lokubhalwa, engakhange abonwe esela okanye etshaya.
U-Kurt Zouma akanazo ii-tattoos ngexesha lokubhala. Ityala lemifanekiso: Instagram.
Ngokuphathelele inkolo yakhe, uZouma ngumSilamsi kwaye uzinikezele kuloo nto. Okungakumbi, uthandaza izihlandlo ezihlanu ngosuku kwaye ubonwe ukuba uye kuhambo ngo-Agasti 2018.
Kurt Zouma kuhambo oluhamba ne Paul Pogba nabahlobo. Ityala lemifanekiso: I-Twitter.
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda ibali lethu leKurt Zouma yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts. Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
I-Bafetimbi Gomis Ibali labantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts